Belzika : Nanamafy fifandraisana amin’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaBelzika : Nanamafy fifandraisana amin’i Madagasikara
Mihamivelatra hatrany ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny any ivelany. Araka izany, dia tonga eto Madagasikara ary nitsidika ny praiminisitra lehiben’ny governemanta malagasy, Mahafaly solonandrasana Olivier, teny amin’ny Lapam-panjakana Mahazoarivo, sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny mpisolo toerana, Beni-Xavier Rasolofonirina, teny Anosy, omaly ny delegasiona avy amin’ny parlemantan’ny Federasiona Wallonie-Bruxelles (PFWB), izay notarihin’ny filohany, Philippe Courard. Izany dia tafiditra indrindra amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ireo parlemantera Frankôfôna.
Araka izany, dia nifototra tamin’ny fiaraha-miasan’ny parlemantera malagasy sy Belza ny dinika teo amin’ireo fihaonana roa omaly ireo. Izany hoe, ny fanamafisana ny fifandraisana sy fiaraha-miasa eo amin’ny parlemantera roa tonta ny fihaonana tamin’izany.
Fa anisan’ny goavana tamin’izany, teny amin’ny Lapa-panjakana Mahazoarivo ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa eo amin’ireo parlemanteran’i Madagasikara sy Belzika.
Voalaza tamin’izany fa vonona ny hanitatra hatrany ny fifandraisan’ny firenena roa tonta ry zareo Belza, indrindra eo amin’ny tontolon’ny toekarena. Eo ihany koa ny fisarihan’i Belzika ireo mpamatsy vola mba hampiasa ny volany eto Madagasikara. Ankoatra izay, voaresaka ihany koa ny mahakasika ny tontolon’ny fampianarana, indrindra eo amin’ny sehatry ny fampianarana ambony, sns.
Etsy andaniny, niangavy ny fifidianan’i Madagasikara ny birao tsy maharitry ny Filankevitry ny Fandriam-pahalemana, taona 2019-2020, izay hotanterahina ny volana jolay 2018 ihany koa ity delegasiona avy amin’ny PFWB ity.
Nampanantena kosa ny praiminisitra amin’ny asan’ny governemanta tarihiny amin’ny fiarovana sy hisarihana ireo mpamatsy vola ho eto Madagasikara.